राहुघाटको सर्च साफ्टको ‘ब्रेक थ्रु’ – धौलागिरी खबर
राहुघाटको सर्च साफ्टको ‘ब्रेक थ्रु’
धौलागिरी खबर	 २०७७ माघ २५, आईतवार १९:५२ गते मा प्रकाशित 575 0
बेनी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधिन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलबिद्युत आयोजनाको सर्च साफ्टको आइतबार ब्रेक थ्रु भएको छ ।
रघुगंगा गाउँपालिका–३ स्थित सर्च साफ्ट र अडित न. ३ देखि खनिएको सुरुङ जोडिएको आयोजनाको प्रर्वद्धक रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले जनाएको छ । रघुगंगा हाइड्रोपावर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट र सुरुङ जोड्ने काम भएको बताउनुभयो ।
“आयोजनाको लागि यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,” उहाँले भन्नुभयो “चार वटा अडिटबाट करिब सात सय मिटर सुरुङ निर्माण भएको छ ।” सर्च साफ्टले सुरुङमा पानीको सतह ब्यवस्थापन र चापलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
आकस्मिक रुपमा बिद्युत गृह बन्द गर्नुपर्दा सुरुङबाट आएको पानीको चापलाई सर्च साफ्टले नियन्त्रण र सतह ब्यवस्थापन गर्छ । राहुघाटको सर्च साफ्टको गोलाई दश मिटर छ । सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्स (जेपी)ले सर्च साफ्ट निर्माण गरेको हो ।
२०७४ मंसिर ५ गते रु. छ अर्ब पचास करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको सिभिल ठेकेदार जेपीले सुरुङ, बिद्युतगृह र बाँध निर्माणको काम एकै साथ अघि बढाएको छ । रघुगंगा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा बिद्युतगृह निर्माण गरिरहेको ठेकेदारले दग्नाम र झिँको सिमानामा पर्ने बाँध सम्म ११ किलोमिटर कच्चि पहुँचमार्ग निर्माण गरेको छ ।
छ किलोमिटर २०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने यस आयोजनाको एक किलोमिटर पेनस्टक पाइप जडान गरेर २९२ मि. उचाईबाट पानी खसाली बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अधेरीखोलामा अडिट २, पिप्लेमा अडिट ३ र तिल्केनी चौरमा अडिट न. ४ खन्ने कार्य सम्पन्न गरि ति अडिटहरुबाट सुरुङ खन्ने कार्य भइ रहेको छ ।
२०७६ कार्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले प्रारम्भिक चरणको काम गरि विस्तृत डिजाइङको कार्यलाई तिब्रता दिएको छ ।